माल्दिभ्सविरुद्ध नेपालले एक ओभरमा गुमायो २ विकेट! - Everest Dainik - News from Nepal
माल्दिभ्सविरुद्ध नेपालले एक ओभरमा गुमायो २ विकेट!
काठमाडौंः १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत माल्दिभ्स विरुद्धको खेलमा नेपालले सस्तैमा ३ विकेट गुमाएको छ । नेपालले तेस्रो विकेटका रुपमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई १९ रनमा गुमाएको छ ।
यसअघि आरिफ शेख १९, आरिफ शेख १७, पारस खड्का ११ रनमा आउट भइसकेका छन् । आरिफ ५.२ र मल्ल ५.६ ओभरमा आउट भएका हुन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालले ६ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर ४८ रन बनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस सागः महिला क्रिकेटमा नेपाललाई कास्य
याे पनि पढ्नुस १३ औँ सागः माल्दिभ्सविरुद्ध नेपालको फराकिलो जित
ट्याग्स: ज्ञानेन्द्र मल्ल, नेपाल भर्सेस माल्दिभ्स